Ahlu Sunna oo beenisay in wada hadal ay la galeyso Maamulka Galmudug – STAR FM SOMALIA
Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in wada hadal ay yeelan doonaan Maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna ee ku kala sugan Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe Sheekh Xasan Gaboobe oo lahadlay idacada starfm ayaa tilmaamay inuusan jirin haba yaraatee wax wada hadal ah oo Dhuusamareeb ka furmaya, islamarkaana u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlu sunna.
Masuuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa sheegay in dhawaan Dhuusamareeb uu ka furmayo shir u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlu Sunna, kaasi oo gar wadeen ay ka tahay Dowladda Ethiopia iyo Urur Goboleedka IGAD.
“Walaaloow wax aan ognahay oo wada hadal ah oo Dhuusamareeb ka furmaya ma jirto ee u dhaxeeya Dowlad Goboleedka Gobolada Dhexe iyo Kooxda aad ku tilmaamtay Galmudug wax wada hadal ah oo noo dhaxeeya ma jiraan, waxaan u aragnaa arintaasi inay tahay Dacaayad muddo soo socotay oo ay faafinayaan Ashqaastaasi” Ayuu ku sheegay Wareysi uu siiyay Idaacada Risaala.
Sheekh Xasan Gaboobe ayaa sheegay cida ay la hadlayaan inay tahay Dowladda Federalka Somaliya, maadaama sida uu yiri Galmudug Gobolada Dhexe aysan masuul ka aheyn.
“Cidaan kala hadleynaa oo aan wax ka tabanayno waa Dowlad Federalka Somaliya waa Dowladayadii waxaan rabnaa inay nala hadasho cida aan daneyna waa Dowlada, ma rabo inaan la hadalno cid aanan talo ka go’in inaan la hadalno oo la mid ah mindi gadaal la ga haayo” Ayuu raaciyay Warkiisa Sheekh Xasan Gaboobe.
Maamulka Ahlu Sunna ayaa gabi ahaanba diidan jiritaanka Maamulka Galmudug ee Gobolada Dhexe ka dhisan.
Shirka Madasha wada tashiga oo lagu soo bandhigayo qaabka ay noqoneyso doorashada 2016